China 5T fantsom-boaloboka masinina ary mpamatsy | Herbin Ice Systems
Hery mihazakazaka: 15.625 KW.
Fahaiza-mamokatra isan'andro amin'ny ranomandry: tubes gilasy 5000 kg isaky ny 24 ora.
Andao hikajiantsika amin'ny milina ranomandry 5T / andro.
Ka isan'andro, ny fahasamihafana amin'ny fanjifana herinaratra dia 30x5 = 150KWH.
(105-75) x 5 x 365 x 10 = 547,500 KWH, izany no fahasamihafana amin'ny fanjifana herinaratra ao anatin'ny 10 taona.
Raha misafidy ny milina fantsom-boasary 5T / andro ny mpanjifa dia hamonjy herinaratra 547 500 KWH ao anatin'ny 10 taona izy ireo.
Raha misafidy milina ranomandry flake teknolojia mahantra hafa ny mpanjifa dia handany vola bebe kokoa izy handoavana izany fanjifana herinaratra fanampiny tsy misy dikany izany, 547500 KWH.
Ohatrinona ny herinaratra 547,000 KWH ao amin'ny firenenao?
Ny herinaratra 219.000 KWH dia eo amin'ny 75000 $ US any Chine.
Previous: Masinina ranomandry 3T
Manaraka: Masinina ranomandry 10T Tube